Shina: Mifampihaika Amin’ny Lasiroan’Antoko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2012 11:13 GMT
Ny antsoina hoe 50 Cent Party na lasiroan'antoko dia ireo mpaneho hevitra an-tserasera indramin'ny Fitondram-panjakana Shinoa na indramin'ny antoko komonista shinoa entina hanefena ny fihevi-bahoaka. Matetika moa ireo Lasiroan'Antoko ireo milaza izay mpitsikera henoin-teny ho mpamadika ny tanindrazana.
Tamin'ny 26 Febroary, ny mpisera Sina Weibo Zhang Nong dia nanapa-kevitra hifampihaika ankarihary amin'ny Lasiroan'Antoko amin'ny alalan'ity lahatsoratra sy sary manaraka ity:
[Azo antsoina hoe ao anaty fitiavan-tanindrazana ve izao?] Raha difotry ny kolikoly ny firenena dia tsy mitsikera ianao; rehefa mihoa-pefy ny manankohariana sy ny mahery dia tsy mahatsiaro ho tezitra ianao; tsy miteny ianao amin'ny fahalafosan'ny fampianarana; tsy mizara ny alahelonao ianao amin'ny faharatsian'ny fitsaboana; tsy hitanao ny fijalian'ny tantsaha; tsy renao ny fitarainan'ny tsy manan'asa; tsy mitsikera ny manao didiko fe lehibe ianao… Fa raha vao mitsikera amin'ny olana rehetra voasoratra eo ambony rehetra ireo aho tia hendratrendratra ianareo ary dia miantso ny namanareo hamelively ahy. Izany ve no fomba itiavanareo ny tanindrazanareo ry tarika lasiroa?
Ny sary etsy ankavia dia fandrafetana indray ny marika famantarana ny hetsika komonista, ny maritoa sy ny antsim-bilona. Navadik'i Zhang ho marik'isa arabo “5”, marika famantarana ny Lasiroan'Antoko, ny fitaovam-piadian'ny revolisiona sosialy. Voazara nihoatra ny in-1800 sy nahazo fanehoan-kevitra 560 ity randran-dresaka ity teo amin'ny sehatra nisy azy. Nampiseho ny fanohanany an'i Zhang ny ankamaroany , raha miezaka ny hamaly bontana kosa ny mpamaky sasany:
黑桃老K2011：Azo ampiasaina amin'ny vatapatin-dry Lasiroa io saina io rehefa maty ry zareo.
10小牛直面改革：Lasa mpanohana mafana fo an'i Zhang aho noho ity hafatra ity. Tsy azoko hoe maninona no maro ny olona manohana ny tanindrazana tsy mahay manavaka ny marina sy ny diso: ‘Tsy maninona ny haratsian'ny tanindrazako, tsara izany; tsy raharahiana izay fahalalahana sy demokrasia misy any amin'ny firenenkafa, fa diso ry zareo.’ Mba misy dikany ve izany fampielezan-kevitra izany?
I我相信：Vokatra avy amin'ny fiarahamonina shinoa ny Lasiroan'Antoko. Nisy izy ireny fa mila manamari-tena amin'ny kapitalisman'ny fahalalàna olona ambony sy ny fanambakana olo-tsotra ny manankohariana sy ny matanjaka. Taloha aho nanompa an-dry Lasiroa, izao hitako fa tsontsa loatra ny fomba fiteny; nateraky ny rafi-piarahamonina nanjakan'ny kolikoly ry zareo. Tsy afa-mibedy azy isika.
随心所意随心动：tarigetran'ny lasiroa: katroka araka ny baikon'ny antoko.
我爱-F1：Tsy hahita ny fahatsapan-tena ao amiko ianao, miankina amin'ny fahavelomana sy ny fialan'ny Antoko izy io.
Soros1981：Lasiroa ny sasany amin'izy ireo. Na izany aza, maromaro kokoa amin'izy iero no teraka tanatin'izao rafitra izao. Tsy afa-misaina tsara ry zareo fa mbola mila azavaina. Mila fotoana ny tantara vao hita.
怀化学院张洪华：Sarotra dia sarotra ny hahita Lasiroa maro dia maro toy izao eto amin'ity tontolo ity. Efa voasasa atidoha ry zareo ary tsy nifoha. Ohatra, miady hevitra matetika amin'ny mpiray efitra amiko aho, 5-6 amin'izy ireo. Tsy Lasiroa ry zareo ary tsy mitari-dalana ho amin'ny fiovana aho. Tian-dry zareo ny manatsonga avy amin'ny boky momba ny ambaratongam-pandrosoana sy mifandraika amin'ny any Shina. Raha miteny amin'izy ireo aho hoe mitovy amin'ny fanaon'ny jiolahy anie izao fanaovana didy jadona izao dia hamaly matetika ry zareo: dia maninona? jiolahy ara-dalàna ry zareo. Ny hany azoko lazaina dia hoe aleo afaka 10 na 20 taona miresaka.
蕓隨風飄：Ai: Raha vao manomboka mahazo ny fandehan'ity firenena ity ianao dia efa an-dalan'ny ho jiolahy ianao izay.
林岳芳: [Mamadika ny fireneny tahaka izao ve ny olona?] Tsy midera ny hamaroan'ny trano avo mitsangana ianao; Tsy mieboebo amin'ny fivelaran'ny arabe vita ianao; tsy miraharaha ny fandrosoan'ny teknolojiantsika ianao; tsy mahita ny hatsaran'ny tanàna ianao; tsy mahita ny fiadananan'ny tantsaha ianao; tsy mahare ny tokelaky ny olona ianao; tsy mitsikera ny haratsian-tsain'olombelona ianao… raha misy ny olana bitika mitranga eto amin'ity tany tahaka ny lanitra ity, tsy miraharaha ny marina ianao, fa mifantoka fotsiny amin'ny trangan-javatra iray hamelezana ny firenena iray manontolo. Mitsambikimbikina ianao miantso ny namanao hanompa sy hamely. Ry andevon'ny tandrefana, izany ve no ivarotanao ny tanindrazanao?
wendySF：Sainan'ny Lasiroan'Antoko? Famoronana vaovao? Manantena aho fa hiaina mandrakizay amin'ity fiarahamonina derainy ity izao taranaka Lasiroa izao sy ny manaraka. Aza manao tahaka an'i Sima Nan, izay manameloka an'i Etazonia nefa nandefa ny vadiny sy ny zanany lahy honina any. Sima no karazan'ny Lasiroan'antoko.